CHIDZIDZO CHEBIOLOGY PAKUKURA KWEMWANA MUDUMBU
Pakati pemasvondo mana nemashanu, uropi unoenderera nekukura hwopetana-petana kuita mapato mashanu akasiyana.
Musoro unotora nzvimbo huru ye hukuru hwe"embryo".
Nzvimbo inogara huropi Inenge denderedzwa ndiyo inoratidzika ichikura panhengo dzose dzeuropi.
Mabasa ese anotanga kuitwa nehuropi anosanganisa pfungwa, kudzidza, kuchengeta pfungwa, kutaura,kuona, kunzwa, kufambisa nhengo dzemuviri, uye kupindura mibvunzo yakaoma.
Pakugadzirwa kwenhengo dzekufema, divi rekurudyi nedivi rekuruboshwe rwemapapu rwunenge rwakasiyana uye rwuchazobatana gare-gare negurokuro nemapapu.
Onaiwo kukura kwechitaka chakazadza dumbu uye chakabatana nemwoyo urikurova.
Itsvo dzakakwana dzinoonekwa mumashure memasvondo mashanu.
Kasaga kane ma"cell" ekutangisisa kuvaka munhu anonzi ma"germ cells". Mumasvondo mashanu aya ma "germ cell" anotama kuenda kunezvekuita mwana zvinowanikwa pedyo neitsvo.
Mumasvondo mashanuwo, "embryo" inoita zvekuvaka maoko, uye mabhonzo akapfava anotanga kuitwa kwapera masvondo mashanu.
Pano tinoona Kugadzirwa kweruoko rweruboshwe nechanza chacho mumasvondo mashanu nemazuva matanhatu.
Pamasvondo matanhatu dende rekuchengeta huropi rinenge richikura nekukurumidza kukunda dzimwe nhengo dzehuropi.
Pano "embryo" inotanga kuita mafambiro anenge kugwina-gwina. Izvi zvinodiwa nekuti zvinokudza inonzi "neuromuscular development".
Mukabata muromo munoita kuti "embryo" idzosere musoro mukati.
Pano nzeve dzinotanga kukura
Pamasvondo matanhatu, kugadzirwa kweropa kunenge kwatanga muchiropa munowanikwa ma"lymphocytes" achigara imomo. Idzi nhengo dzinowanikwa muropa ndidzo dzakakosha pakugadzira masoja emuviri.
Pazasi pemapapu, panenhengo inoshandiswa pakufema kwemunhu, uye pamasvondo matanhatu inenge yakwana.
Pano ura hudiki hunenge huchionekwa uye ndihwo huchaita guvhu ichi chinhanho chinonzi "physiologic herniation", uye chinogadzirira dzimwe nhengo dzinowanikwa mudumbu.
Pamasvondo matanhatu maoko anotanga kunyatsoonekwa
Uropi unenge hwava kutoshanda mumasvondo matanhatu nemazuva maviri.
Minyatso inotanga kukura mumativi emuviri ichienda kunzvimbo inowanikwa minyatso pamberi pechipfuva.
Panopera masvondo matanhatu nechidimbu, magokora anenge avakuonekwa, zvigunwe zvinotanga kunyatsoonekwa zvisina kubatana uye ruwoko rwunogona kufamba-famba.
Mapfupa anenge achisimba,uye izvi zvinonzi "ossification", zvinotanga nebvupa repabendekete kana kuti "collar bone", uye mapfupa eshaya dzepamusoro nedzepazasi.
Munhikwi unowonekwa pamasvondo manomwe.
makumbo anoonekwa kutanga kufamba nekudaira kanamai vavhunduka.
Nhengo ina dzemwoyo dzinenge dzavakukwana. Pamagariro edu, mwoyo unorova kanokwana ka167 paminiti rega.
Kugwina kwemwoyo kunobatwa mumasvondo manomwe anechidimbu anoratidza marovero emwoyo wemunhu mukuru.
Mumadzimai panogara mazai,panenge pavakuonekwa pamasvondo manomwe.
Pamasvondo manomwe anechidimbu,Kutanga kweziso kunenge kwavakuonekwa zvakanaka uye chekubwairisa ziso, izvi ndizvo zvinotangisa kukura nekukurumidza.
Minwe yemaoko inonyatsokubuda uye zvigunwe zvemaoko hazvisisina kubatana nezvekutsoka
Maoko avakugona kusangana, uye tsokawo dzakusangana.
Pamasvondo masere uropi hwunenge hwakwana uye huremo hwacho hwunenge hwuchikwana hwuremo chidimbu che "embryo".
Pano makuriro acho anokurumidza zvakanyanya.
Pamasvondo 8,75% ye'embryo' Inenge ichishandisa ruoko rwerudyi Chidimbu chasara hachina chinoshandisa ruboshwe kunyanya kana kusavenehanya nazvo Uku ndiko kutanga kwekuona Vanorerekera kurudyi kana ruboshwe.
Magwaro ezvevacheche anotaura Nezvekushanduka kuti kunoonekwa masvondo gumi kana makumi maviri. Asika, kushanduka uku kunoshamisa kunokurumidza kuonekwa munzimbo dzine "low-gravity" inenge iri munonzi mu'amniotic sac'. Chinodiwa chete kushaya simba rekurwisana ne'gravitational force' inenge irikunze kwechibereko inodzivirira kushanduka.
Pano "embryo" inenge yave kutamba zvinesimba.
Zvinogona kunonoka kana kukurumidza, kamwechete kana kakawanda, ipapo-ipapo kana zvekuvhunduka.
Musoro nemutsipa zvinenge zvava Kutendeuka uye maoko achibata kumeso izvi zvinoitika nguva dzose
Kana "embryo" ikabatwa inobwaira, kana kuomesa shaya, kuda kubata, kana kufambisa zvigunwe.
Pakati pemasvondo manonwe nemasere,nhengo dzese dzeziso dzinokurumidza kukura dzigovhara ziso kunge richavharika zvachose.
Kunyange muchibereko musingapinde mhepo, "embryo" inoratidza kufema mumasvondo masere.
Panguva ino, Itsvo dzavakubudisa weti inosangana ne'amniotic fluid'
Mu "embryo" dzevanarume, panotanga kukura zvechirume pagotangawo kugadzirwa zvinonzi "testosterone".
Mapfupa,nemajoyini, nyama, tsinga, ne tsinga dzeropa dzenhengo dzinenge dzanyatsofanana zvikuru nedzevakuru.
Pamasvondo masere ganda, rekunze, rinenge richikurawo rinenhengo dzakawanda, richipera kunjenjemera.
Tsiye dzinotanga kukura nemvere dzinokura kutenderedza muromo.
Pamasvondo masere ndopanoguma inonzi "embryonic period".
Panguva ino, "embryo" yega-yega inenge yabva mu"cell" rimwechete kusvika ma"cell" anokwana zviuru nezviuru zvemamiriyoni anovaka zviuri zvina zvenhengo dzakasiyana.
Panguva iyi "embryo" inenge yave nenhengo dzese dzayo dzakafanana nedzevanhu vakuru.